‘चलचित्र हजार जुनी सम्म’को शिर्ष गीत सार्वजनिक(भिडियो) – हिमाल न्युज
‘चलचित्र हजार जुनी सम्म’को शिर्ष गीत सार्वजनिक(भिडियो)
‘चलचित्र हजार जुनी सम्म’को शिर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ ।
गायक उदय सोताङ्गको हिट गीतमा ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प’मा सहभागी भएर चौथो स्थान हासिल गरेका आयुष केसीले आफ्नो आवाज दिएका हुन् । चलचित्रमा उदयको गीतलाई रि–एरेन्ज गरिएको छ । गीतलाई उदयले नै तयार पारेका हुन् ।
गायक आयुष केसीले उदयको यो चर्चित गीतमा आवाज दिनु पाउनुलाई आफ्नो जीत भनेका छन् । चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, स्वस्तिमा खड्का, संचिता लुइटेल, अनुभव रेग्मी, सलोन बस्नेत, अभिषेक प्रधान, शिवहरि पौडेल लगायतको स्वर छ ।
चलचित्रमा सामिप्यराज तिमिल्सिनाको पटकथा छ । कविता रेग्मी कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा विशाल चाम्लिङ्को लगानी छ ।
बुहारी दीपिकाका बारेमा रणवीरका बुवाले के भने ?
उपराष्ट्रपति पासाङको लडाकु प्रशिक्षणको गोप्य भिडियो सामाजिक संजालमा...
जान्भी किन सँधै बोकेर हिँड्छिन् यो बोतल ?
किन गरिन भारत पुगेर करिश्माले नेपालकै बेईज्जत?
‘तीजमा बब्बाल मचाउँछु’ भन्दै आइन् नर्सिङ्ग अधिकृत सरिता
चलचित्र ‘कहिँ कतै’ को नयाँ गीत ‘यो मौसम’...